Deshko Media, Author at Deshko News - Page5of 217 Deshko News Deshko Media, Author at Deshko News - Page5of 217
यसरी गर्नुस् सम्भोग, चरम सुख प्राप्त हुनेछ !
डा. दिनेश बाँस्तोला यौनप्रतिको दृष्टिकोण पुस्तौँपुस्ता एकै किसिमको हुन्छ भन्ने छैन। समयको परिवर्तनसँगै एक पुस्ताको दृष्टिकोण अर्को पुस्तामा पुग्दा परिवर्तन हुनु स्वभाविकै हो। यसको अर्थ हाम्रा पुर्खाले लिएको यौनको
अभिनेत्री आँचल शर्मा पल शाहसँग नाम जोडिएर आउने गरेको हल्लाले आजित बनेकी आँचल अब बिहे बन्धनमा बाँधिने तयारीमा छिन्। एक वर्षदेखि आँचल डा. उदीप श्रेष्ठसँग गहिरो प्रेममा छिन्। उनीहरु प्रेमलाई
बालबालिकाको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि कार्सन किङले फुटबल प्रशंसकहरुबाट एक पैसा पनि उठ्ला भन्ने कल्पेका थिएनन्। उनी अमेरिकाको एउटा बियर पसलमा छिरेका थिए र त्यहाँ एउटा सानो गुनासो राखे। उनले
प्रधानमन्त्री भेट्न प्रचण्ड अस्पतालमा, कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था?
काठमाडौं, मंसिर १३ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न अस्पताल पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट
प्रधानमन्त्री विरामी भएकै बेला चीनले किन भ्रमणमा बोलायो प्रचण्डलाई ?
काठमाडौं, मंसिर १३ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । नेपाल चाइना मिडिया फोरमद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आफू चिनियाँ
सेनाको मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थी ठगेको खुलासा, माफी माग्दै प्रधानसेनापतिले भनेः फिर्ता गर्छाैं
काठमाडौं, मंसिर १३ नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएको खुलासा भएको छ । सुधारवादी प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाको मेडिकल कलेजमा पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भेटिएको
कानुन मन्त्रालय पाएपछि उपेन्द्र यादव मालामाल, ओलीलाई दिए धन्यवाद
काठमाडौं, मंसिर १३ उपप्रधान एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले नयाँ मन्त्रालय आफ्नो लागि अवसर भएकाे बताएका छन् । उनले न्यायिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता पनि औल्याए । शुक्रबार मन्त्रालयमा
काठमाडौं, मंसिर १२ अमेरिकाले नेपालमा भारतीय आतंकवादी समूह मुजाहिद्दिनको अखडा बनिरहेको भन्दै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टको नेपाली सेनाले कडा जवाफ दिएको छ । रिपोर्ट सार्वजनिक भएको करिब एक महिनापछि नेपाली सेनाले
त्यो षडयन्त्र नभएको भए ओलीपछि नारायणकाजी पूर्वमाओवादीबाट निर्विकल्प प्रधानमन्त्री चुनिने थिए
त्यो षडयन्त्रको असर नेपालीहरुको चाँडै बिर्सने बानी छ, त्यसैले हामीले धेरै दुःख पाएका छौं । बिर्सिइन लागेको एउटा राजनीतिक षडयन्त्रले कुनै पनि बेला असर देखाउने लक्षण भएपछि यो लेख्दैछु ।
काठमाडौंमा राती भूकम्पको कडा झट्का
काठमाडौं, मंसिर ११ काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको कडा धक्का महसुस गरिएको छ । बुधबार राती १० बजेर १० मिनेटमा भूकम्पको कडा धक्का महसुस गरिएको हो । भूकम्पको झट्काले सुत्न ठिक्क परेका